रूले फ्री | Coinfalls रूले जम्मा | प्राप्त 25% बोनस
क्यासिनो रूले के हो? यो डेमो मा नि: शुल्क लागि प्ले गर्न सकिँदैन? एक £ 500 जम्मा बोनस पनि छ?
शुल्क रूले क्यासिनो एक विश्व प्रसिद्ध क्यासिनो खेल कुनै परिचय आवश्यक छ. पनि जेम्स बण्ड सिनेमा, विभिन्न कार्टून र कार्यक्रम रूले टेलिभिजन मा सय धेरै पटक चित्रण गरिएको छ. रूले फ्री कैसीनो खेल को एक epitome र सम्पूर्ण वैश्विक जुवा भ्रातृत्व र fraternity रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ.
कुरा वा क्यासिनो सोचिरहेका मा कसैले मन गर्न आउने पहिलो कुरा रूले हो.
वहाँ रूले विभिन्न प्रकारका हुनुहुन्छ:
रूले शुल्क खेल स्रोतहरू जस्तै एक नम्बर बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ
Well the method of playing Roulette remains the same for free demo games as well as in games where Coinfalls रूले जम्मा वास्तविक पैसा सट्टेबाजी समावेश छ. खेल को प्रत्येक संस्करण लागि, नियम र विधिहरू नै रहन.
एक) यो खेल धेरै खेलाडी छन्, र तिनीहरूले हुन सक्छ वा तिनीहरूले संसारको विभिन्न भागमा स्थित छ र अझै हुन सक्छ जडान र साथ दोश्रो प्ले.
ख) आज, पनि फेसबुक प्रयोगकर्ता आफ्नो मित्र जडान र कुनै पनि ठाउँबाट र समय को कुनै पनि विन्दुमा रूले मुक्त अनलाइन खेल्न सक्छन्.
यो बिक्रेता पनि एक Croupier रूपमा जानिन्छ. यो व्यापारीहरु सामान्यतया धेरै सुन्दर छन्, आकर्षक, मनोरम र प्रकृति मा अपिल. यो खेलाडी नेत्रहीन आकर्षक र आकर्षक व्यापारीहरु रुचि रहने सुनिश्चित छ.
अर्को प्लस पोइन्ट, निष्ठालाई वा क्यासिनो घर को इमानदारिता बारेमा खेलाडी को मन मा कुनै पनि शङ्का वा शङ्काको कारण प्रत्यक्ष व्यापारीहरु को उपस्थिति बाहिर शासन गरिने छ.
रूले जहाँ खेलाडीहरू एक नम्बर मा शर्त एक खेल हो, दायरा वा संख्या को एक समूह. यो बिक्रेता वा croupier को क्यासिनो रूले पाङ्ग्रा संख्या देखि सुरु भएको छ जो spins0र समाप्त हुन्छ 37/ 38; रूले को प्रकार निर्भर गर्दछ तपाईं खेलिरहेका छन्.
प्ले अमेरिकी रूले
अमेरिकी रूले जस्ता केही भिन्न डबल छ 00, कारण जो मान्छे मात्र युरोपेली रूले गरेको सामान्यतया रुचि. बल को कताई रूले पाङ्ग्रा को विपरीत दिशा मा हालियो छ. अन्तमा गति गुमाउने पछि, बल यसको घरबार ठाउँमा आउँछ. यो निःशुल्क रूले खेल को विजेता बल को यो अन्तिम घरबार स्थानमा निर्धारण गरिन्छ. यो खेल किनभने पहलू र thrill यसलाई संलग्न को अत्यन्तै रोमाञ्चकारी छ.